Tilmaamaha iyo tilmaamaha la raaco si loo doorto qaboojiyaha | Ragga Stylish
Waa maxay qaboojiyaha la iibsado?
Goormaan xusuusannaa qaboojiyaha? Badanaa waa horraanta gu'ga, goorta cimilada wanaagsan ayaa bilaabmaysa inay timaado waxaan dareemaynaa kuleylka. Laakiin sida caadiga ah waxaan uga tagnaa maaraynta iibsiga illaa ugu dambayn, marka ay siciradu ka sarreeyaan.
Sida guryaha intiisa kale la iibsado, qorshayntu waa muhiim.
1 Waa maxay nooca qaboojiyaha aad u baahan tahay?
2 Waxyaabaha u gaarka ah qalab kasta
4 Talooyin kale
Waa maxay nooca qaboojiyaha aad u baahan tahay?
Suuqa waxaad ka heli doontaa moodooyin badan. Waxaa jira Waxay isticmaalaan marin biyoodyo, isdhexgalka saqafka, qaboojiyaha dhexe, iwm. Kuwa ugu isticmaalka badan ayaa ah kuwa bixiya ikhtiyaarka meelaynta qunsuliyadaha darbiyada guriga. Waxyaabaha kale, maxaa yeelay way fududahay in la rakibo oo ka jaban.
Si aad u cusbooneysiiso qolalka guriga qaarkood, Nidaamyada kala qaybsan waa ikhtiyaar wanaagsan. Si aad u wada-qaboojin guriga oo dhan, waxaa jira fursado kale, xitaa ka qurux badan oo bilicsanaanta, of qaboojiyaha dhexe.
Waxyaabaha u gaarka ah qalab kasta
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah qalabka ayaa si fiican ugu dhex jira qolka, taas oo ah, buuxinta baahiyaha qaboojinta booska. Waan sameyn karnaa (ama u diri karnaa khabiir) xisaabinta xamuulka kuleylka in qaboojiyaha waa inuu lahaadaa, si loo ogaado qaboojiyaha ay tahay inuu qalabku bixiyo.
Hadaad tixgaliso ka faa'iideyso qunsulka sidoo kale xilliga qaboobahaXilligan inta badan cutubyada qaboojiyaha waxay la yimaadaan bamka kuleylka oo lagu daro.
Isku-dheelitirnaanta Waxtarka Tamarta ayaa cabiraya xiriirka ka dhexeeya awooda qaboojinta qaboojiyaha iyo isticmaalka tamarta taasi waa lagama maarmaan. Sare u kaca EER, ayaa sareeya waxqabadka.
La waxtarka tamarta ee loo yaqaan A +++ Waxaad kaa caawin kartaa yareynta isticmaalka korontada ilaa 30% adoo hagaajinaya awooda iyo heerkulka la doonayo.
Qalabka leh dareemayaal cimilada smart way kicin karaan qaabka keydinta, haddii qolku madhan yahay.
Dhab ahaantii waxaa jira moodooyinka leh nidaamyada xakamaynta Wifi, barnaamijyada wanaagsan ee ka socda bannaanka gurigeenna.
Moodooyinka badankood waxay leeyihiin a Habka ECO iyo habeen kale, si loo yareeyo isticmaalka tamarta.
Ilaha sawirka: Assista Home Blog / Perspirex
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Waa maxay qaboojiyaha la iibsado?
Tod wuxuu rabaa inaan u ekaano cillad la'aan barkadda
Prada guga / xagaaga 2018 oo ku yaal shan fure